संक्षिप्त: मोजिला फायरफक्सका लागि आरएसएस पाठक | लिनक्सबाट
संक्षिप्त: मोजिला फायरफक्सका लागि आरएसएस पाठक
En लिनक्सबाट मैले यसका पाठकहरूमा धेरै लेख प्रकाशित गरेको छु आरएसएस र त्यो भित्र छ जीएनयू / लिनक्स हामीसँग यस प्रकारको अनुप्रयोगको लागि धेरै विकल्पहरू छन्।
यदि मलाई यसको बारेमा केहि मनपर्‍यो ओपेरा, के यो धेरै फंक्शनलिटीज एकीकृत भएको छ जुन बहु प्रयोगको लागि आदर्श बनाउँछ, र ती मध्ये एक आरएसएस रिडर हो जुन आफै ब्राउजरमा एकीकृत हुन्छ। क्रोमियम y फायरफक्स तिनीहरूको भागको लागि, उनीहरूलाई यो प्रकार्य विस्तार गर्न विस्तार चाहिन्छ र संक्षिप्त (एफएफ को लागी) यो एक उत्तम हो।
यससँग विस्तार हामी ब्राउजरबाट वा फाईल आयात गरेर समाचार स्रोतहरू थप्न सक्दछौं .opML। यसको ईन्टरफेस सरल, सफा र धेरै सुन्दर छ (पुरानो जस्तो देखिन्छ Google Reader) र यससँग धेरै कन्फिगरेसन विकल्पहरू छन्। को फाइदा संक्षिप्त अगाडि लाइफेरिया, बनावट o न्यूजब्यूटर के हामीले भर्खरको समाचारको मजा लिन ब्राउजर बन्द गर्नुपर्दैन।
हामी यसलाई डाउनलोड गर्न सक्छौं यो लिंक.
नोट: यदि कसैसँग यसको लागि कुनै समान छ क्रोमियम र तपाईं मलाई पठाउन सक्नुहुन्छ, म सदा कृतज्ञ हुनेछु।
लेखको पूर्ण मार्ग: लिनक्सबाट » aPLICACIONES » संक्षिप्त: मोजिला फायरफक्सका लागि आरएसएस पाठक
संक्षिप्त पनि आधारभूत छ। फायरफक्समा वास्तवमै पूर्ण फिड रिडर न्यूजफक्स हो: https://addons.mozilla.org/es-es/firefox/addon/newsfox/
अनुकूलन, अर्डर गर्ने, थप्ने / हटाउने, समूहहरू सिर्जना गर्ने, ट्याग गर्नेहरू, आयात / निर्यात गर्ने आदि सम्भावनाहरू कुनै पनि अन्य एकीकृत आरएसएस रिडर भन्दा धेरै उत्कृष्ट छ। अझ बढी के छ, यसले स्वतन्त्र आरएसएस पाठकहरूलाई छिटो पार्छ।
यस मध्ये धेरैको माझमा एक सुविधाहरू, जुन मैले धेरै उपयोगी पाएँ भनेको तपाईं परिभाषित गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईं फीडलाई पढ्न चाहानुहुन्छ वा सम्पूर्ण वेब पृष्ठ प्रस्तुत गर्न (कार्यान्वयन गर्ने, वा होइन, js)।
तर मलाई लाग्छ सबैभन्दा उत्तम कुरा गर्नु भनेको यसलाई प्रयास गर्नु हो र प्रत्येकलाई आफ्नै निष्कर्षमा पुग्न दिनु हो।
मैले त्यो विस्तार प्रयास गरेको छैन। मलाई यसको एक नजर दिनुहोस् र त्यसपछि म तपाईंलाई भन्नेछु। साझेदारीको लागि धन्यवाद .. 😀
उत्कृष्ट! म लामो समयदेखि यस्तै चीज खोज्दै थिएँ! फिड नोटिफायर प्रयोग गर्ने क्रममा (http://www.feednotifier.com/)। फायरफक्सको लागि यो उत्कृष्ट आरएसएस रिडर साझा गर्नुभएकोमा धन्यबाद।
Pinguy OS Mini ११.१० उपलब्ध छ
मेरो डेस्क आज